Momba anay - Wuxi Lianyou Plastic Industry Co., Ltd.
Niorina tamin'ny 2007, Wuxi Lianyou Plastic Industry Co., Ltd dia manampahaizana manokana amin'ny famokarana fantsona polyethylene avo lenta sy fittings mandritra ny 15 taona mahery.
1) fantsona HDPE (polyethylene avo lenta),
2) Sodina vy tariby nohamafisiny HDPE fitambarana fantsona,
3) Hole harato HDPE fantsona mitambatra,
4) Sodina HDPE fantsom-pifangaro
5) HDPE mety
Misafidy fitaovana manta 100% tena tsara, vita amin'ny tsipika famokarana mandroso, mampihatra teknolojia vaovao, manangana ny fahaizany amin'ny fantsom-plastika sy ny fantsona, ankehitriny dia ekena ho toy ny orinasa matihanina amin'ny fantsona HDPE & fantsona fantsona isika, ho an'ny rano indrindra ny fampiharana. famatsianna, famonoana afo, fananganana monisipaly, famatsian-drano sy fanodinana rano, fifandraisan-davitra, famindrana entona, petrochemical, fanondrahana fambolena. Manana ny mari-pamantarana antsika izahay --Deyou.
Ny tanjonay dia ny hanome ny vahaolana fantsona tsara indrindra ho an'ny mpanjifa ary hanampy ny mpanjifa hanana fivoarana sy fitomboana tsaratsara kokoa hahatratrarana ny toe-javatra mandresy. Na inona na inona takinao - lehibe na kely - Wuxi Lianyou dia vonona ny hametraka ny zavatra niainany hiasa ho anao. Hatramin'izao, izahay dia nandray anjara tamina tetik'asa lehibe maro teto an-toerana sy tany ampitan-dranomasina, ary nahazo laza tsara. Miaraka amin'ny traikefa sy tanjaka toy izany, matoky izahay fa hanome ny vahaolana tsara indrindra amin'ny filan'ny mpanjifa mifototra amin'ny tombony azo amin'ny fifaninanana.
Fanamby anay hamaly ny filanao !!!
Niditra tamin'ny sehatry ny fantsona ny mpanorina ary lasa mpivarotra fantsona.
Ny traikefa tamin'ny varotra telo taona dia nanangona vola sy tambajotran-tserasera ara-tsosialy.
Wuxi Lianyou Plastic Industry Co., Ltd dia natsangana.
Manitatra ny fahaizan'ny famokarana, mampitombo ny karazana vokatra, manomboka amin'ny vokatra tokana ka hatrany amin'ny produts isan-karazany.
Nandray anjara tamin'ny fananganana fotodrafitrasa nasionaly maro, toa ny metro China, lalamby haingam-pandeha haingam-pandeha.
Niorina ny sampan-draharaha ivelany, ary nanomboka nanangana tsena ivelany.
Sokafy ny tsena iraisam-pirenena USA, Canada, Japon ary Peroa ary omeo ny serivisy fananganana fotodrafitrasa ho an'ny firenena maro.
Manomboka amin'ny firenena 8 tany am-boalohany ka hatramin'ny firenena 15, dia mifanakaiky kokoa amin'ny tsena iraisam-pirenena isika.
Tombanana hanokatra firenena 80, ary avelao ny paompinay hanompo firenena sy faritra maro kokoa.
Ny sehatra fampiharana lehibe sy ny tombony azo avy amin'ny fantsom-pe dia toy izao manaraka izao:
HDPE (High density Polyethylene) dia omena amin'ny tsenan'ny fantsom-pokonolona ao Shina ankehitriny. Mivoatra hatrany ny fantsom-plastika. Ny fantsona PE, ny fantsona PP-R ary ny fantsom-pohy uPVC dia samy mipetraka amin'ny toerana iray, izay ahitana ny firoboroboan'ny fantsom-pandrosoana PE no mahavariana indrindra. PE tubes no be mpampiasa. Anisan'izany ny fantsom-pamatsian-drano sy ny fantson-tsolika no tsena fampiharana lehibe indrindra.
Ny fantsom-panafody PE ho an'ny famatsian-drano dia vokatra azo soloina amin'ny fantsom-by vy nentim-paharazana sy fantsom-pisotroana rano etilena polychlorine.
1. Rano fisotro azo antoka any ambanivohitra sy fantsom-pisotro rano fisotro any ambanivohitra sy ambanivohitra.
2. Rafitra tambajotram-pitaterana rano ao an-tanàna, orinasan-drano, fampitaovana rano.
3, simika, fibre simika, sakafo, ala, fanontana sy fandokoana, fivarotam-panafody, indostrian'ny hazavana, fanaovana taratasy, metallurgy ary fantsom-pitaterana ranon-tsakafo indostrialy hafa.
4, tsipika fifandraisan-davitra sy fifandraisan-davitra, casing fiarovana tariby herinaratra.
5, fantsom-boaloboka tsy misy trench, ny fahita indrindra dia ny fiampitana injenieran'ny Trenchless, ary ny fiampitana ny renirano, sns.
6. Fitrandrahana fitrandrahana harena an-kibon'ny tany.
7. Fantsom-panafody amin'ny fambolena.
8, famoahana ny maloto kaominaly, kaliberaly lehibe amin'ny ankapobeny, ampiasaina hanoloana ny fantsom-pako simenitra
9, paompy hafanana avy any an-tany, calibre kely no lehibe, indrindra ny caliber de32 no be mpampiasa indrindra, ampiasaina amin'ny fantsom-pandefasan-drano mivezivezy
10. Siphon Drainage. Orinasa lehibe maro izao no misy ny rafitra fanondrahana siphon. Ny fantsom-pe dia ampiasaina ho toy ny fantson-drano, ary ny hamafiny sy ny hamafiny dia ambony noho ny PVC. Noho izany, amin'ny tetikasa fanalan-drivotra siphon, ny fantsom-panafody PE no fantsona lehibe.
Ny sehatry ny fampiharana sy ny tombony azo avy amin'ny fantsom-bozaka vy volo taolana PE fitambarana fantsona dia toy izao:
Fantsom-pifandraisana vy tariby vy metaly polyethylene fantsom-pifangaroana vita amin'ny tariby vy mahery miaraka amin'ny rafitry ny tambajotra miolikolika havia sy havanana ho fanamafisana, polyethylene avo lenta (HDPE) ho toy ny matrix, ary HDPE avo lenta avo lenta resin fatorana, karazana fantsona vaovao misy ivelany polyethylene avo lenta mifamatotra mafy. Fampiharana Sehatry ny vy tariby harato taolana taolana PE mitambatra fantsona
1. Injeniera monisipaly: famatsian-drano an-tanàn-dehibe, fantsom-pandefasana hafanana miverina amin'ny rano, entona ary fantsona fandefasana entona voajanahary.
2. Injeniera simika: fantsom-pandrosoana sy fantsom-panafody amin'ny fitaterana entona manimba, ranon-javatra ary vovo-tsolika amin'ny indostria toy ny asidra, alkaly, famokarana sira, petrochemical, zezika simika, fivarotam-panafody, simia, fingotra ary plastika, sns.
3. Sahan-tsolika sy sahan-tsolika: maloto maloto, fantson'ny solika, fangaro amin'ny solika sy gazy, fantsom-bokatra solika sy solika ambaratonga faharoa sy tertiary ary fantsom-pitaterana.
4. Injeniera herinaratra maharitra: fanodinana rano, fitaterana any anaty rano, fanalana vovoka, sisa tavela ary fantsom-pitaterana hafa.
5. Fitrandrahana harena ankibon'ny tany: fitaterana antonony manimba amin'ny fantsom-by vy tsy ferrous sy ny pulp ary ny fantsom-pamokarana.
6. Làlan-kizorana: fantson-drano nandevina, fantsom-pifandraisana
7. Injeniera an-dranomasina: fitaterana an-dranomasina, fantson-dranomasina an-dranomasina ary fantsona tariby optika (herinaratra), sns.
8. Famokarana sambo: alefaho ny fantsom-pako, fantsom-pako, fantsom-pako, fantson-drivotra
Ny sehatry ny fampiharana sy ny tombony azo avy amin'ny fantsom-boaloboka vita amin'ny vy polyethylene dia toy izao:
Ny fantsom-boaloboka vita amin'ny metaly polyethylene vy dia fantsom-pifangaroana miaraka amina harato nohosoran'ny tadin'ny vy mangatsiaka toy ny taolam-paty sy thermoplastic mitambatra. Noho ny fampidirana ny taolam-paty nohamafisina, ny tanjaky ny fantsona dia nihatsara, ny karazana sy ny marika plastika thermoplastic dia azo ampiasaina hamokarana fantsona mitambatra amin'ny tanjona samihafa.
Ny rafitra famatsian-drano amin'ny harato plastika vita amin'ny plastika dia mampiasa fitaovana PE80 na PE100 navoaka, novokarina araka ny fenitry ny orinasa, miaraka amina fanamafisana tsara, fanoherana ny fihenjanana amin'ny tontolo iainana ary fanoherana haingana, ny fikajiana fampisehoana dia mihoatra ny fika fampisehoana fantsom-pamokarana rano madio PE.
1. Mety hahatratra 50 taona ny androm-piainana maharitra, amin'ny toe-javatra mahazatra.
2. Madio izy io ary mamaha ny olan'ny fandotoana rano fisotro faharoa.
3. Milamina ny rindrina anatiny, kely ny fanoherana ny fikorianan'ny rano, ary ambany kokoa ny 30% noho ny an'ny fantsom-by.
4. Mavesatra maivana sy fikirakirana mety.
5. Fanorenana mora, fizotran'ny welding tsotra ary vidin'ny tetikasa feno ambany. Ny lokon'ny fantsona dia fotsy, mainty na ny loko nifanarahan'ny roa tonta.
Ny sehatry ny fampiharana sy ny tombony azo amin'ny fantsom-bozaka vy vita amin'ny taolana vy dia toy izao:
Ny fantsom-bolan'ny polyethylene vita amin'ny taolam-by dia manondro karazana fantsona mitambatra vaovao izay mamakivaky bara vy mahery amin'ny fantsona fototra polyethylene ary manarona ny sosona ivelany miaraka amin'ny tranga polyethylene.
1. Fanoherana ny mari-pana tsara: raha mitovy ny fiakaran'ny maripana amin'ny medium fampitana, ny fihenan'ny tanjaka dia avo roa heny noho ny an'ny fantsona polyethylene.
2. Fanehoana tena tsara: Aorian'ny fametrahana anaty tany, ny fitaovana fanandramana fanaraha-maso andriamby tsotra dia azo ampiasaina hahitana sy hahitana, mba hialana amin'ny fahasimbana ateraky ny fitrandrahana injeniera hafa;
3. Fiaraha-miaina henjana sy malefaka: ity fantsona ity dia manana fihenjanana tsara sy fanoherana misy fiantraikany, ary tsy matahotra fifandonana mandritra ny fametrahana sy fampiasana azy; Izy io dia azo ampiasaina ho fantsona overhead;
4. Fanoherana kely mikoriana: ny fahamendrehan'ny velarana anatiny amin'ny fantsom-by vatan'ny vy dia 1/20 fotsiny amin'ny fantsom-by, ary tsy misy fihenan'ny scaling na savoka, ary ny fahaizan'ny fitaterana dia tsy hihena noho ny fahasimbana, scaling, sns, noho izany, ny fantsom-bozaka vita amin'ny taolam-by dia manana fahaiza-mitatitra avo lenta ary misy fiantraikany mahavonjy angovo mahatalanjona;
Ny sehatry ny fampiharana sy ny tombony azo avy amin'ny fantsom-pandrefesana fantsom-pandrefesana PE sy ny fantsom-pohy taolana vy dia toy izao:
Fittings fantsom-pandrefesana PE dia plastika (polyethylene) fittings fittings izay azo atsonika mba hifandray amin'ny hafanana ateraky ny ankehitriny. Noho ny vidiny, ny fantson'ny fantsom-panafody mafana an'ny PE dia ampiasaina bebe kokoa noho ny fantson-tsolika fantsom-panafody PE amin'ny fampiharana injeniera, saingy ny fantsom-by fantson-tsolika herinaratra dia mitana andraikitra lehibe sy tsy azo soloina amin'ny injeniera sy ny fikojakojana, indrindra amin'ny fananganana, ireo fantson-tsolika mifangaro no tsy dia voa. amin'ny tontolo ivelany sy ny toetran'ny olombelona, ​​noho izany dia manana fahamendrehana tsara kokoa izy ireo ary malaza amin'ny mpampiasa. Ny fantson-tsolika mitsonika amin'ny herinaratra dia matetika ampiasaina indrindra amin'ny injeniera fantsom-panafody.
1. fanoherana ny harafesina: androm-piainana maharitra;
2. Tsy misy famoahana eo am-piraisana: ny fifandraisana amin'ny fantson-tsolika mandeha amin'ny herinaratra dia raisina, izay manome antoka ny mombamomba ny fitaovana interface, ny rafitra ary ny vatan'ny fantsom-paompy PE ary mahatsapa ny fampidirana ny mpiray sy ny fantsona;
3. Fanoherana mahomby amin'ny hetsika ambanin'ny tany sy ny enta-mavesatra: aorian'ny rafitra fantsom-panafody PE dia ampifandraisina amin'ny fomba fantsom-boaloboka, ny mpiorina miorina amin'ity fomba ity dia mahatohitra famoahana farany ary tsy hisy ny famoahana iraisana. Mandritra izany fotoana izany, ny toetra mampiala sasatra an'ny PE dia afaka mandany ny adin-tsaina amin'ny alàlan'ny fanovana. Noho izany, amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra dia tsy ilaina amin'ny fivontosana sy ny miondrika ny fametahana lafo vidy. Etsy ankilany, mifototra amin'ny fahamendrehana avoakany, ny elongation amin'ny fiatoana dia mazàna mihoatra ny 500%, ary ny rafitra fantsona PE dia manana fahaiza-manao matanjaka tsara amin'ny fametrahana tsy mitovy ny fototr'ilay fantsona.
Ny sehatry ny fampiharana sy ny tombony azo avy amin'ny fantsom-pandefasana fantsom-panafody PE ary ny fantsom-pantsaka PE dia ireto manaraka ireto:
Ny fomba famokarana PE fantsom-pandehanan'ny fantsom-panafana mafana dia ny famolahana tsindrona indray mandeha amin'ny alàlan'ny milina famolahana tsindrona. Ny akora fototra dia ny polyethylene avo lenta (HDPE), ary ny maodelin'ny fifandraisana dia: tonon-taolana miempo mafana sy socket mafana miempo;
1. fifandraisana mety kokoa
2. Mora vidy noho ny fittings fittings
3. Fitaovana fantsona PE ihany
Ny saha fampiharana sy ny tombony amin'ny fittings vy-plastika dia toy izao manaraka izao:
1. Ny fantsom-by plastika vita amin'ny plastika GI (mifono) dia afaka manome lalao feno ny tanjaky ny metaly amin'ny metaly sy ny tombony azo amin'ny fanoherana ny harafesin'ny plastika. Avy eo tsy azo atambatra maharitra ny fantsona sy plastika mitambatra. Izany dia satria ny coefficient amin'ny fanitarana hafanana amin'ny plastika dia efa ho avo folo heny noho ny vy. Mandritra ny fizotry ny fanitarana hafanana miverimberina sy maharitra ary ny hatsiaka mangatsiaka, dia hisy ny fiparitahana sy ny fisarahana tsikelikely. Ny fantsom-plastika dia mivelatra ary mivoaka avy ao amin'ilay faritra amin'ny fahavaratra, amin'ny ririnina, ny fialana ary ny fampisehoana ny rindrina anatiny amin'ny vy misy ny vy dia mahatonga ny orifice sy ny fantson-tsolika ho mora simba kokoa.
2. Ny fantsom-pifangaro vy-plastika tsy misy fangarony koa dia misy ny fivoahan'ny fantson-tsolika vokatry ny fiparitahan'ny hafanana sy ny fihenan'ny hatsiaka. Mandritra izany fotoana izany, ny fanitarana hafanana sy ny fihenan'ny hatsiaka dia miteraka elanelam-potoana ny fisarahana amin'ny fantsom-pira SS sy ny fantsom-plastika anatiny, ary miditra ao anaty elanelana ny rano amin'ny alàlan'ny fantson-tsolika, ka mahatonga ny harafesin'ny elanelana tsy misy fangarony, misy fiatraikany amin'ny androm-piainan'ny fantsona .
3. Ny fantsom-by vita amin'ny plastika mifono plastika dia ampiasaina amin'ny fanaterana rano an-tanàn-dehibe, tetik'asa famatsian-drano amina trano sy indostrialy ary be fihetsiky ny tarika mpangataka sy ny mponina. Ity karazana fantsona plastika ity amin'ny rindrina anaty fantsom-drano dia misy firaiketam-po mahery, fifehezana avo lenta ary fanoherana ny harafesina tsara, eo ambanin'ny hery ivelany, tsy manalefaka ny fonosana, mibontsina, mihintsana, tapaka ary misy tranga hafa, ary ny firakotra dia tsy -tsy misy poizina sy tsy misy loto, ary tsy mora ny manangona refy. Izy io dia fantsom-pandefasana rano an-tsaina. Miorina amin'ny harafesina, tsy misy loto, tsy mora ambaratonga, manatsara be ny kalitaon'ny rano fisotro, mampihena ny fako amin'ny loharanon-drano, izay mahomby amin'ny fikojakojana ny tontolo iainana sy ny fanatsarana ny fari-piainan'ny firenena. Mandritra izany fotoana izany, ity karazana fantsona ity dia misy fanoherana tsara harafesina, ny ain'ny serivisy dia intelo heny noho ny fantsona GI mahazatra.